Xidhitaanka Shirka Garoowe maxaa laga filayaa - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Xidhitaanka Shirka Garoowe maxaa laga filayaa
Xidhitaanka Shirka Garoowe maxaa laga filayaa
Muqdisho (Walwaal.com) Sida la filayo waxaa maanta lasoo afmeerayaa shirkii Garoowe, inkasta oo aanay ka qayb gelin Isimada waaweeyn ee majeerteen sida Boqor Burhaan & Islaan Bashiir, maalintii furitaanka shirkana uu ka cadhooday Suldaan Siciidka Warsangeli ka dib markii hadalkii furitaanka laga siin waawey halkii uu ka mudnaa, oo waxaa taasna markhaati madoon u ah Garaad Saleebaan, wixii uu ku sheegay hadalkiisii uu u jeediyey kuraasta madhan ee laga kala dareeray.
Halkaa waxaa ka muuqdey in agaasinka shirku ahaa mid fashilan oo qaab-darran, hayeeshee Suldaan Siciidka Warsangeli waxaa lagu maslaxay inuu xidhitaanka shirka ka noqon doono qofka u horeeya ee hadla.
Shirku sida muuqata wuu ka baaqsaday, hanaankii markii hore loo diyaarshey, iyo filashadiisii oo siyaasiyiinta majeerteen waxay dareemeen in jubaland iyo dawlada kiiniya looga adkaaday, dagaalkii iyo isjiidjiidkii siyaasadeed, ayna kusoo fool-leedahay, cadaadis siyaasadeed oo aanay ka moosi karayn ismaamulka puntland oo majeerteenku ku awro kacsado. Sidaa darted waxaa la filayaa in ay maanta soo saaraan hadal ka duwan kii markii hore ay ku haminayeen, waxaa se su’aali ka taagantahay, sida la isu cunsiin karo, danaha siyaasadda majeerteenka iyo waaqiciga hadda taagan, waayo isbahaysigii ay qaybta ka ahaayeen ee mucaaradka Muqdisho iyo danihii UAE, waxay noqon karaan kuwo aan ku qancin baaqa shirka maanta, kasoo bixi doona.
Gunta sheekadu waa in rogaalkan laga tag-roonaaday Siyaasiyiinta maamula siyaasada majeerteenka, taas oo laga dhadhansan karo hadalkii Faroole ee ahaa in ay taageersan yihiin doorashadii Galmudg ayna ka qayb geli doonaan caleema saarka madaxweyne Qoor-qoor. Arintaa oo lafteedu ku timid hanjabaadii ahayd in aanay Galmudug faraha ka laaban doonin Puntland hadii ay damacdo in ay masas ugu koriso mus-danbeedkeeda.
Previous articleMiyuu soo hannuunay Faysal Cali Waraabe?
Next articleHa qaadan daawada ibuprofen, cortisone … haddii uu ku haleelo COVID-19